Faah Faahinno Dheeraad ah oo ka soo Baxaya Dagaalkii Maanta ee Goof-Gaduud (Dhagayso) - Hablaha Media Network
Faah Faahinno Dheeraad ah oo ka soo Baxaya Dagaalkii Maanta ee Goof-Gaduud (Dhagayso)
HMN:- Waxa ay faah faahinno dheeraad ahi ka soo baxayaan khasaare ka dhashay Dagaal maanta ka dhacay Degaanka Goof-gaduud Buurey oo 30-KM ujira magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay.
Dagaalkan ayaa u dhaxeeyay Ciidanka Dowladda Federaalka iyo kuwa Koonfur-Galbeed oo isku dhinac ah iyo Dagaalyahano ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Dagaalkan ayaa yimid, kadib markii Dagaalyahano ka tirsan ururkaasi Al Shabaab ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen fariisin Ciidamada Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin Degaankaasi.
Taliyaha saldhiga Degaanka Goof-gaduud Buurey, Maxamed Abuukar Mursal (Timo-jilac) ayaa waxa uu sheegay Dagaalkii sakay ay khasaare ba’ani ku gaarsiiyeen Shabaabkii weerarka soo qaaday, sheegayna inay dagaalyahanadaasi ka furteen hub ay siteen.
Ururka Al Shabaab ayaa iyaguna baraha Internet-ka ee ay wararka ku faafiyaan waxa ay ku sheegteen in dagaalkii saakay ay kula wareegeen gacan ku haynta Degaanka Goof-gaduud Buurey ee Gobolka Baay.